Ahoana ny fanatsarana ny rafitra fiasan'ny GNU / Linux? | Avy amin'ny Linux
Fampiharana hanatsarana ny GNU / Linux
Ny fanatsarana, na ny fanatsarana manokana ny Rafitra miasa anay dia ny fanatsarana ny fampisehoana mitovy amin'izany, avy amin'ny fanatanterahana ny fiovana lojika (rindrambaiko) na fanovana ara-batana (fitaovana). Raha misy ny fanovana fitaovana, ny Operating System dia afaka mahazo tombony amin'ny fanavaozana na amin'ny fampitomboana ny Hard Disk Space, RAM Memory, CPU Type, ankoatry ny zavatra hafa.
Raha misy olana momba an'ity famoahana ity dia misy ny toro-hevitra na ny tolo-kevitra ho amin'ny lozika, toa ny ny fampiasana ny rindranasa na ny fanatanterahana hetsika ara-teknika ahafahantsika mitazona fahombiazana avo lenta sy fampandehanana ny rafitra fiasanay amin'ny vidiny aotra.
1 Manatsara ny fampiasana Terminal
1.1 Preload sy Prelink
1.2 Deborphan sy Localepurge
1.3 Fikirana amin'ny terminal
2 Amin'ny haavon'ny rindran-tsary
Manatsara ny fampiasana Terminal
Ho an'ireo mpankafy ny Terminal sy ny Script voarindra dia misy safidy toy ireto: «Ahoana no anaovana GNU / Linux Maintenance amin'ny fampiasana script? y Ahoana ny fomba hanaovana Data Backup amin'ny fitaovana amin'ny fampiasana Shell Scripting? izay noresahantsika tato ho ato. Ireto ohatra 2 ireto dia manarona ireo lafin-javatra lehibe hitazomana ny rafitra fiasanay, izay mitazona ny Rafitra fiasanay havaozina sy tsy misy fako dizitaly ary mitazona ny angon-drakitra voaaro ao aminy.
Na izany aza, ny fahatsapana ny Ireo hetsika ireo amin'ny fomba tanana na mandeha ho azy dia azo atao amin'ny fametahana fonosana sasany na fanitsiana singa sasany hampitomboana ny haavon'ny fahombiazana, ny fitoniana ary / na ny fiarovana ny OS Ny ohatra tsara amin'ny fanatsarana ny fampiasana ny fampiasa amin'ny terminal dia ny fametrahana sy ny fametrahana ireo fonosana »Preload» ary »Prelink« miampy fonosana »Deborphan» sy »Localepurge«.
Preload sy Prelink
Preload dia terminal fampiharana izay manadihady izay rindranasa no be mpampiasa indrindra, ary alohan'ny hametrahana azy ireo amin'ny fahatsiarovana RAM an'ilay fitaovana mampihena ny fotoana anombohanao rehefa mihazakazaka azy ireo. raha Prelink fampiharana terminal ihany koa io fa izay tompon'andraikitra amin'ny fanafainganana ny famoahana mavitrika ireo tranomboky OS sy fampiharana manan-danja izy io.
Miaraka amin'ireo rindranasa 2 miaraka ireo dia mora tokoa ny manatsara ny rafitra GNU / Linux.
Deborphan sy Localepurge
Deborphan dia fitaovana iray mahita fonosana "kamboty" ao amin'ny Rafitra fiasanay. Andeha ho tadidintsika fa ny fonosana iray dia ao anatin'ny toe-javatra »kamboty» rehefa esorina ny fonosana ho an'ny ray aman-dreny (fonosana mametaka ny hafa amin'ny alàlan'ny fiankinan-doha fotsiny), hoy ny fonosana »zaza" mbola mijanona ao anaty kapila tsy misy ilana azy, mibodo toerana tsy misy ilana azy.
Deborphan dia mamaritra ny fonosana izay tsy manana olon-kafa miankina amin'ny fametrahana anao, ary mampiseho anao ny lisitry ireo fonosana ireo. Ny tena ilaina dia ny mitady tranomboky, saingy azo ampiasaina amin'ny fonosana amin'ny faritra rehetra.
Ny fampiasana mandroso an'i Deborphan dia azo ampiharina amin'ny alàlan'ity andalana baiko manaraka ity:
raha mbola Localpurge dia fitaovana iray hamafana ireo boky torolàlana rehetra sy fanampiana amin'ny fiteny hafa ankoatr'ireo voalamina amin'ny alalàn'ny rafitra fiasanay.
Tena ilaina izany satria maro amin'ireo fampiharana no mirona hametraka boky torolàlana sy fanampiana, amin'ny fitenintsika matetika (Espaniôla sy Anglisy), ary koa amin'ny fiteny hafa izay azo antoka fa tsy hampiasaintsika mihitsy. Amin'ny farany, dia mitaky toerana malalaka amin'ny kapila mafy ataontsika, miaraka amin'ireo angona izay tsy hampiasainay velively.
Ity rindrambaiko roa ity dia manamora kokoa ny fanatsarana ny rafitra fiasan'ny GNU / Linux.
Fikirana amin'ny terminal
Ary anisan'ireo fanitsiana azo ampidirina ao:
Mampiasà, ankoatry ny faka tena mpampiasa, mpampiasa mpandrindraizany hoe mpampiasa manana alalana root namboarina hampiasa ny baiko sudo, ary mpampiasa mahazatra ho an'ny mpampiasa tsirairay hiditra amin'ny solosaina hampiasana azy.
Mampiasà script log log event, izay mirakitra ny baiko rehetra soratana ao anaty console na terminal hitahiry firaketana azo antoka sy azo henoina isaky ny baiba voatonta ao. Hanazava izany bebe kokoa amin'ny lahatsoratra ho avy izahay.
Tazomy ireo soatoavina marina daty sy ora an'ny BIOS sy ny Rafitra miasa.
Hamarino tsara ny fikirakirana marina an'ny fisie »interface«, »resolv.conf«, »NetworkManager.conf» ary »loharanom-baovao.list«
Amin'ny haavon'ny rindran-tsary
Amin'ity ambaratonga ity dia betsaka ny rindranasa tsara azo atolotra nefa mba tsy hahatonga ny lisitra ho lehibe dia afaka manome soso-kevitra toy ny:
Bleachbit dia fampitaovana multiplatform izay ny tena fampiasa dia ny manafaka ny habaka amin'ny kapila mangirana, toa ilay "ccleaner" malaza sy azo ampiharina ao amin'ny Windows. Ary toy ny »ccleaner«, mamela antsika hamafa ireo rakitra mampihena ny vintana ho sitrana izy ireo.
Izy io dia mitahiry ny fiainantsika manokana sy ny fandriam-pahalemana amin'ny fomba mahomby kokoa, ahafahantsika mampitombo amin'ny fomba mahomby kokoa ny habaka malalaka ananantsika eo amin'ny kapila, manome antoka fa tsy afaka mamerina ny angon-drakitra na farafaharatsiny mora foana ny antoko fahatelo.
Fampiharana tena tsara hafa amin'ity fomba ity dia: Sweeper, Stacer y Gcleaner.
Izy io dia fitaovana ampiasaina amin'ny sary izay manamora ny fampisehoana an-tsary ny fampahalalana momba ny fanjifana toerana amin'ny kapila mafy, toy ny isan-jaton'ny fampiasana, toerana malalaka, haben'ny lahatahiry ary rakitra ao amin'ny OS-nay. Baobab dia afaka mamantatra ny fanovana amin'ny Hard Drives amin'ny fotoana tena izy ary mamakafaka azy ireo na inona na inona elanelany lavitra na eo an-toerana, ankoatry ny fampitaovana hafa. Izy io dia azo apetraka amin'ny alàlan'ny console avy amin'ny repositories an'ny Distros mahazatra indrindra.
Fampiharana mitovy amin'ny Baobab izay azo ampiharina: Filelight, JDiskReport, QDirStat y k4dirstat.
Izy io dia andiana fitaovana mamela ny fikojakojana (fanadiovana) ny fisie tsy ilaina na be loatra ao anatin'ny System Operating. Izy io dia ahitana ny GTK + Interface Graphical, miampy fampiasa andalana baiko. Re rehetra mba hamerenana amin'ny laoniny ny habaka disk. Izy io dia azo apetraka amin'ny alàlan'ny console avy amin'ny repositories an'ny Distros mahazatra indrindra. Izy io koa dia manana fahaizana manaisotra fonosana ary mitady zavatra toy ny:
Anaran'ny fisie misy olana
Rohy an'ohatra simba na lany andro.
Fampiharana mitovy amin'ny FSLint azo ampiharina: Mitadiava rakitra Finder y GDuplicateFinder.
Raha fantatrao ny hafa afaka manampy anay, dia omeo hevitra izy! Raha tsy izany dia antenaiko fa ity lahatsoratra ity toy ny mahazatra dia manampy antsika rehetra hanao ny GNU / Linux Systems ho iray mitovy na tsara kokoa noho ny an'ny tompony hafa! Mandra-pahatongan'ny lahatsoratra manaraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Ahoana ny fanatsarana ny rafitra fiasan'ny GNU / Linux?
Ireo fotoana nandehandehanako tany Linux =)
Hector elizalde dia hoy izy:
Miarahaba anao, nampiasa BleachBit tamin'ny rafitra Linux Mint 19.2 aho ary tena niasa ho ahy ny marina, mora ny mametraka sy mampiasa pro dia mila mitandrina ianao rehefa mampiasa azy io amin'ny maody Root, satria very izay voafafa mandrakizay. manomboka eo dia tena tsara
Valiny tamin'i Hector Elizalde
Paul letelier dia hoy izy:
Lahatsoratra tsara, saingy tsy hanome soso-kevitra ny hampiasana an'i Dephorban miaraka amin'ireo bitsika voalaza aho, farafaharatsiny mba tsy ho an'ny olona tsy manam-pahaizana (toa ahy). Diso nametraka ny fitendry sy ny totozy rehefa niditra ny birao, ka tsy maintsy nanao famerenana manontolo ny xserver-xorg ... Tsy misy zavatra matotra, fa nandany ora vitsivitsy nanadihadiana ny fomba fanamboarana azy aho. arahabaina
Valiny tamin'i Pablo Letelier
Miarahaba, Pablo. Mazava ho azy fa baiko am-pitandremana i Deborphan, satria, raha tsy manana traikefa ianao ary manaiky ny famafana izay mety angatahin'i Deborpahn hamafa, mety hipoitra ny olana toy ireo izay notaterinao, nandany be tamin'ny voalohany tamin'io baiko io aho.